Eno (အီနို) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Eno (အီနို)
Eno (အီနို) ကဘာလဲ။
Generic Name: Eno (အီနို) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Eno (အီနို) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အောက်ပါအစာအိမ်လက္ခဏာတွေပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့ အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
Eno (အီနို) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးတစ်ခုစာ(5 g) သို့ ဇွန်းတစ်ဇွန်းအပြည့်စာအမှုန့် (5ml) ကို ရေတစ်ခွက်နဲ့သောက်နိုင်ပါတယ်။
Eno (အီနို) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Eno (အီနို) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Eno® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Eno (အီနို) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Eno (အီနို) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Eno (အီနို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အထူုူးသဖြင့် အက်ဆစ်ထိန်းဆေး antacidsတွေ သောက်နေရလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Eno (အီနို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Eno (အီနို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Eno (အီနို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
4.3 g( ပလတ်စတစ်အိတ်အသေးစာ သို့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ) ရေနွေးဖန်ခွက်တစ်ဝက်နှင့်
အများဆုံးပမာဏ6doses တစ်နေ့ ပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးစာ သို့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းခြောက်ဇွန်းစာ
ကလေးတွေအတွက် Eno (အီနို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Eno (အီနို) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ